တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကြား ကုန်တင်အဝေးပြေးလမ်းဝန်ဆောင်မှုအသစ် ချိတ်ဆက် - Xinhua News Agency
ချုံချင့်၊ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ချုံချင့်မြူနီစီပယ်က ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနှင့် အဝေးပြေးလမ်းအခြေပြု နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်တင်လမ်းကြောင်းအသစ်အား စတင်လိုက်ကြောင်း ဒေသခံအာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။ချုံချင့်မှ ထရပ်ကားများသည် တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်ရှီးကျွမ့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရှိ Longbang ဆိပ်ကမ်းမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းနိုင်ပြီး ကီလိုမီတာ ၁,၄၀၀ ခန့် ခရီးနှင်လျက် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရှိ ခရီးဆုံးနေရာသို့ မရောက်မီ အချိန်နှစ်ရက်ခန့်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ လမ်းကြောင်းသစ်သည် ဘေးကင်းကင်းနှင့် အချိန်မီ ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှု ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းနှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (ASEAN) ကြား ကုန်သွယ်မှုထပ်မံမြှင့်တင်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ချုံချင့်သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် အဝေးပြေးကုန်တင်ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ထရပ်ကား စီးရေ ၇,၄၀၀ ကျော်ဖြင့် ကမ္ဘောဒီးယား၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်းနှင့် ဥဇဘက်ကစ္စတန် အပါအဝင် နိုင်ငံများသို့ ကုန်စည်များ သယ်ယူပို့ဆောင်လျက်ရှိသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ တံခါးဖွင့်စီးပွားရေးဝါဒလမ်းကြောင်းသစ်၏ လျင်မြန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ ကုန်တွင်းမြို့ဖြစ်သော ချုံချင့်သည် ယခုနှစ် ပထမ ၇ လအတွင်း နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုမှာ ယမန်နှစ်ကထက် ၃၁.၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ ယွမ် ၄၄၂.၄၅ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၈.၆၇ ဘီလီယံခန့်) မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း အကောက်ခွန် အချက်အလက်များအရ သိရသည်။ (Xinhua)
CHONGQING, Sept. 15 (Xinhua) — Southwest China’s Chongqing Municipality has launchedanew highway-based cross-border freight line with Vietnam, local authorities said.
Traveling about 1,400 km, trucks from Chongqing can pass through the Longbang Port in south China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region before arriving at their destinations in Vietnam in around two days.
Chongqing, an inland city on the fast track of China’s new round of opening up, saw its foreign trade increase by 31.6 percent year on year to 442.45 billion yuan (about 68.67 billion US dollars) in the first seven months of this year, customs data showed. Enditem
Aerial photo taken on Nov. 17, 2020 showsacross-border highway regular lorry for Kazakhstan leaving the Nanpeng Highway Bonded Logistics Center in southwest China’s Chongqing Municipality. (Xinhua/Huang Wei)